ဓမ္မပူဇာ အစီအစဉ်များ: ဗုဒ္ဓ၀ံသရက္ခိတအသင်း၏စတုဒီတာထမနဲအလှူ
ဗုဒ္ဓ၀ံသ၇က္ခိတ အသင်း မှ တပို့တွဲလဆန်း( ၁၄ )ရက် ၊ ၁၇ ၇က် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၁ ကြာသပတေးနေ့ ညနေ ( ၃ ) နာရီ
တွင် ဘုရားဖူးလာဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အား စတုဒီတာထမနဲ ကျွေးမွေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၉ ရက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၁ မှ ၁ ရက် မတ်လ ၂၀၁၁ ထိ တရားပွဲများကိုလည်း ၁၁ ရက် ၁၁ ည တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ
ဖြစ်ကြောင်း နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မျှော်၍ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Posted by ကျနော်ဝေယျာဝစ္စ သမား at 2/10/2011 06:30:00 AM
Labels: ကုသိုလ်အလှူ, တရားပွဲအစီအစဉ်များ
မင်္ဂလာပါ...ဓမ္မပူဇာ မိသားစု မှ ကြိုဆိုပါတယ်...
၃၈ လမ်း ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပမည့်တရားပွဲ
၃၈ လမ်း အလယ်ဘလောက် ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပမည့်တရားပွဲ ၁၃ ရက် ဇန္ဇ၀ါရီလ ၂၀၁၁ ကြာသပတေးနေ့တွင် ( ဆင်ဖြူတောင်ဆရာတော် ) အရှင်ဂုဏိန္ဒ ၁၄ ...
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ ၏ တရားပွဲ ကံမြင့်ကျောင်းတိုက် ၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် တရားပွဲကျင်းပမည့်နေရက် ...
ဓမ္မဒူတဆရာတော်အရှင် ပညာဝရ ( သိမ်ဇရပ် ) ၏ တရားပွဲ
ဓမ္မဒူတဆရာတော်အရှင် ပညာဝရ ( သိမ်ဇရပ် ) ၏ တရားပွဲ ကံမြင့်ကျောင်းတိုက် ၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ တရားပွဲကျင်းပမ...
ကောသလ္လအိပ်မက် ၁၆ ချက်
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် အမှတ် ( ၆ ) ရပ်ကွက် ၊ ၄၃ လမ်း ၊ အောက်လမ်း တွင် ကျင်းမမည့် ပထမအကြိမ်မြောက်တရားပွဲ ၁၆ - ၁ - ၂၀၁၂ ခု တနလာင်္နေ့ တွင် အရှင်ဇေ...
ပုဇွန်တောင်မြို့ နယ် မဟာညောင်ကုန်းတိုက် မဟာစည်သြ၀ါဒခံ လယ်တီစံသာသနာ့ရိပ်သာ အထူးတရားပွဲ (၁၉ - ၁ - ၂၀၁၀ ) ( အင်္ဂါနေ့) ၁၃...
၅ . ၂ . ၂၀၁၀ သောကြာနေ့က ဆရာတော်အရှင် ခေမိန္ဒ ( ခင်မကန်...စစ်ကိုင် ) ဗုဒ္ဓ၀ံသ...
ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ နှင့် သီးစုံဒါန်ပေါက်လှူဒါန်းပွဲ
ဗိုလ်တထောင်စေတီတော်အတွင်း၌ တည်ထားကိုကွယ်ထားသော ဇမ္ဗူ့ဥသျှောင်တိလောကမာန်အောင်မဟာမုနိဘုရား ဗုဒ္ဓ၀ံသရက္ခိတ အသင်း လူငယ်များ၏ ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက်ဝ...
ငယ်ခါကလျှင်၊ မသင်ပညာ၊ ဥစ္စာမစု၊ သူ့ကိုချစ်ဖျက်၊ သူ့သက်သတ်စား၊ သူ့မယား၌၊ ပြစ်မှားတုံဘိ၊ ပစ္စည်းရှိလျက်၊ စိုးစိမလှူ၊ မွေးမြူမိဘ၊ မပြုရနှင့်၊ ဆုံ...
ဝေဘူဆရာတော် ညွှန်ပြတော်မူလေ့ရှိသော သနိ်္ဒဋ္ဌိက ဓမ္မလမ်းစဉ်
၁။ ဘုရားအဆုံးအမဖြစ်တဲ့ ပိဋကသုံးပုံ အကုန်လုံးဟာ ဆင်းရဲမှလွတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်၍ နည်းတွေများသော်လဲ အားလုံးအတူတူပဲ။ အကုန်လုံး လိုက်ပြီး လုပ်စရာမလိ...
Blog Archive October 2009 (1) December 2009 (3) January 2010 (4) March 2010 (1) April 2010 (1) September 2010 (2) November 2010 (1) December 2010 (9) January 2011 (16) February 2011 (5) March 2011 (9) April 2011 (5) May 2011 (4) June 2011 (8) July 2011 (4) August 2011 (2) September 2011 (1) October 2011 (3) November 2011 (2) February 2012 (1) March 2012 (8) April 2012 (1) May 2012 (3) September 2012 (4)
criss angel, mindfreak
၁၉၅၂ ခုနှစ်က သတင်းစာအရေးအသားနှင့်သတ်ပုံ - ၁၉၅၂ ခုနှစ်က သတင်းစာအရေးအသားနှင့်သတ်ပုံ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၂၁-၆-၂ဝ၁၈ Photo from Patrick Minn
(RECORDING TV PROGRAM WITH VLC PLAYER) - အဆငျ့ (၁) VLC PLAYER ကိုဖှငျ့ပါ။ အဆငျ့ (၂) *MEDIA >>> OPEN NETWORK STREAM* သို့သှားပါ။ အဆငျ့ (၃) အောကျပါ TV PROGRAM URL မြားထဲမှ မိမိကူးလိုသ...
ဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ် ... ၂ - ဇာတ်လမ်းကိုဆက်ရရင်ဗျာ ... တစ်နေ့ တော့ မောင်ဖြူရဲ့ အမေအိုကြီးဟာ၊ မီးစာကုန်ဆီခန်းတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီး၊ သဘာဝအလျှောက် ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ပဲ ဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းသ...
feature content slider by labels
သိဗ္ဗဉ်ဥာဏ်တော်အစွမ်းသုံးပါး သိရန်မှန်က မကျန်ရအောင် လုံးဝစုံလင် အကုန်မြင် သိဗ္ဗဉ်ဥာဏ်တော် အစွမ်းတည်း။ သိသည့်တရား များအပြား၌ ဟောထားစဖွယ် နည်းအသွယ်သွယ်ကို ချယ်လှယ်စုံလင် အကုန်မြင် သိဗ္ဗဉ်ဥာဏ်တော် အစွမ်းတည်း။ ကျွတ်ထိုက်ကြပေ များဝေနေ၏ က္ကနြေ္ဒစရိုက် သူ့ အကြိုက်ကို နှိုက်ချွတ်စုံလင် အကုန်မြင် သိဗ္ဗဉ်ဥာဏ်တော် အစွမ်းတည်း။ ဥာဏ်တော်စွမ်းပကား ဤသုံးပါးကြောင့် အများဝေနေ ကျွတ်လွတ်စေဖို့မနေမနား သက်တော်အားဖြင့် ကြီးမားလေဘိ ရှစ်ဆယ်ပြည့်၍ ပရိနိဗ္ဗာန် စံသည့်တိုင်အောင် သယ်ယူဆောင် ဘုန်းခေါင်ငါတို့ဘုရားတည်း။ ဘုရားရှင်တော် မပွင့်ပေါ်လျှင် လူတော်အများ စိတ်ကောင်းထားလည်း ဤကားကုသိုလ် အကုသိုလ်နှင့် ထိုထိုဘုံဘ၀ မသိရ များလှအပြစ်တွေ ဘုရားရှင်တော် ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ ဟောဖော်ညွန်ကြား မြတ်တရားကြောင့် ဤကားကုသိုလ် အကုသိုလ်နှင့် ထိုထိုဘုံဘ၀ သိကြရ များလှကျေးဇူးတွေ။ ကျေးဇူးတော်ရင် ဘုရားရှင်ကို နေ့ စဉ်မပြတ် ကျေးဇူးဆပ်ဘို့အမြတ်ရတနာ သာသနာ၏ နိင်ရာဝန်ထမ်း လွန်ကြိုးပမ်း လူစွမ်းပြကြလေ သိဗ္ဗဉ်ဥာဏ်တော်အစွမ်းသုံးပါး
ဗုဒ္ဓ၀ံသရက္ခိတအသင်း ၏ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက်အထူးတရားပွဲ
ဗုဒ္ဓ၀ံသရက္ခိတအသင်း ၏ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက်အထူးတရားပွဲဖိတ...
ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင် ဆေကိန္ဒ မွေးနေ့ ပူဇော်ပွဲ
ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင် ဆေကိန္ဒ ၏ သွေးလှူဒါန်းပွဲ နိူးေ...
ဓမ္မပူဇာ အစီအစဉ် များကို လက်လှမ်းမီသလောက် ဖော်ပြသွားပါမည် မိမိ ပတ်ဝန်းကျင် မှ တရားပွဲများရှိပါကလည်းပေးပို့ နိင်ပါသည် ကြော်ငြာပေးပါမည်...ကူညီမှုဖြင့် ကုသိုလ်ယူကြပါ...တရားထူး တရားမြတ် များ ရရှိကြပါစေ...
" border="0" alt="www.dhammapuzar.blogspot.com" />
ဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ ၏ တရားတော်များကိုနာကြား ခံယူတော်မူပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျနော်သည်ဝေယျာဝစ္စလုပ်ငန်း များကိုစိတ်ဝင်းစားလျှက်ကိလေသာကင်းဝေစေရန် ၇ည်ရွယ်၍လုပ်ကိုင် တတ်လာရပါတယ် ဆရာတော်၏ဆိုးဆုံးမမူကြောင့် လမ်းမှန်ကိုစလျှောက် တတ်လာရပါတယ် ဆရာတော်၏ဆိုးဆုံးမကို အစဉ်နာခံလျှက်... မပေးဘဲနဲ့အလကားယူ မလှူဘဲနဲ့ အလကားတောင်း မညောင်းဘဲနဲ့ အလကားထိုင် မဆိုင်းဘဲနဲ့ အလကားတွန့် မစွန်ဘဲနဲ့ အလကားစား ဘယ်တရားပါ့ မလဲ...
ယောဆရာတော် ၏ တရားတော်
Latest tracks by thingyan
လူနတ်များစွာ ချမ်းသာရေးမို့ အသက်ပေးလို့ စွန့်ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာသနာအတွက်တော့ ငါပါအသက်ဆုံးစေမည်၊ နောက်မဆုတ်ပေါင် ခုလိုတွေးလို့ ကုသိုလ်ရေးမို့ ကြိုးစားမည်။ (မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီး) ကုသိုလ်ရေးမို့
ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား သတ္တ၀ါအားလုံးတို့ ဘေး၇န်ခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ
ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ ၏ တရားတော်များကိုနာကြားခံယူတော်မူပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကျနော်ဝေယျာဝစ္စလုပ်ငန်းများကိုစိတ်ဝင်စားလျှက်ကိလေသာကင်းဝေစေရန်၇ည်ရွယ်၍လုပ်ကိုင်တတ်လာပါတယ်...ဆရာတော်၏ဆိုးဆုံးမမူကြောင့်လမ်းမှန်ကိုစလျှောက်တတ်လာရပါတယ်...ဆရာတော်၏ဆိုးဆုံးမကိုအစဉ်နာခံလျှက်...
ရွှေကျင်အစည်းအဝေး ( နှစ် )
ရွှေကျင်အစည်းအဝေး ( သုံး )
ရွှေကျင်အစည်းအဝေး ( လေး )
ရွှေကျင်အစည်းအဝေး ( ငါး )
ရွှေကျင်အစည်းအဝေး ( ခြောက် )
မုန်းလောက်အောင်ကြိုးစားလိုက်...ကြစမ်းပါ သင်္ကြန်တွင်းတရားစခန်း တရားတော် ၂၀၁၁ ဧပြီလ
တရားတော် အပိုင်း ( ၂ )
တရားတော် အပိုင်း ( ၃ )
တရားတော် အပိုင်း ( ၄ )
တရားတော် အပိုင်း ( ၅ )
တရားတော် အပိုင်း ( ၆ )
တရားတော် အပိုင်း ( ၇ )
တရားတော် အပိုင်း ( ၈ )
တရားတော် အပိုင်း ( ၉ )
တရားတော် အပိုင်း ( ၁၀ )
တရားတော် အပိုင်း ( ၁၁ )
ဤ ဗုဒ္ဓ၀ံသရက္ခိတ အသင်းဝက်ဆိုက်ကို ၂၂ ဂျုလှိုင်လ၂၀၁၁ သောကြာနေ့တွင် စတင်ပူဇော်ပါသည်။
Yangon, Rangoon, Myanmar (Burma)
ကျနော်ဝေယျာဝစ္စ သမား ဓမ္မပူဇာတရားပွဲ အစီအစဉ်များကို သင့်လက်လှမ်းမီသလောက် ကုသိုလ်ပြုနိင်ပါကြောင်း. Powered by Blogger.
at 2/10/2011 06:30:00 AM